$61.20 $72.00 Unoponesa 15% ($10.80)
Iyi Asia Inofuridzirwa Kaftan Maxi Dress inyanzvi kubva kuMaxi. Nguo iyi inobatanidza vintage design nezvino kutsvaga kubudisa yakanakisisa yemafashoni chinhu. Iyi yekufuridzirwa yeAsia yekuKaftan Maxi yaizopa chero mukadzi uyo anoiisa pamazuva ano maonero evanhu.
Muenzaniso wepfeko yakanyatsogadzirwa uye yakasimbiswa. Iine maitiro akanaka emichindwe yakasiyana; kusanganisira bhuruu, tsvuku uye bhuruu, yakagadzirirwa pabani rakasvibirira. Izvi zvinogadzira chipfeko chekuona maziso pasina kunyanya kupenya.
The sleeves Mira kungotevera musara while chipfeko chacho chengetani chakareba mumutambo wekare kaftan. Pane zvikwata on kana divi yehupfeko. Imwe yakajeka yakasviba, iyo imwe yakarongeka, ichiwedzera kubata kusina kunaka kwehupfeko.
Nguo yacho inogona kupfekwa nyore nyore nokuti chero chiitiko, sezvinokanganisa mabhokisi ose ekukodzera uye nyore. Chimiro chekuAsia chakafuridzirwa chingaita kuti iwe umire mumhomho yezvikonzero zvose zvakanaka.
Sleeve Length: hafu